KEDU IHE DỊ MMA KARỊA WINDOWS 10 MA Ọ BỤ 7: ỊKỌWA USORO SISTEMỤ - WINDOWS - 2020
Windows 10 ma ọ bụ 7: nke ka mma
Ntọhapụ nke ọhụụ ọhụrụ ọ bụla nke sistemụ arụmọrụ Windows na-enye onye ọrụ n'ihu nhọrọ siri ike: Nọgide na-arụ ọrụ na ochie, nke nwere usoro maara nke ọma ma ọ bụ gbanwee gaa na nke ọhụrụ. Ọtụtụ mgbe, n'etiti ndị na-agbaso osote OS a, enwere arụmụka gbasara ihe ka mma - Windows 10 ma ọ bụ 7, n'ihi na nsụgharị ọ bụla nwere uru nke ya.
Ihe dị mma: Windows 10 ma ọ bụ 7
Isiokwu: Windows 10 na 7 tụnyere
Odi OS ka ị na-aga n'ihu?
Ọdịdị mbụ na nke kachasị mma n'ime nsụgharị niile nke Windows 7 na Windows Windows ọhụrụ ahụ nwere ọtụtụ nha (dịka ọmụmaatụ, otu usoro ihe a chọrọ), mana enwere ọtụtụ esemokwu ma na imewe na ọrụ.
N'adịghị ka Windows 10, G-7 enweghị tebụl ọ bụla.
Ogologo Windows 7 Windows 10
Nkwupụta Nhazi Windows di iche iche Nwepụta ohuru ọhụrụ na akara ngosi volumetric, ị nwere ike ịhọrọ ụdị ọkọlọtọ ma ọ bụ tile
Njikwa faili Explorer Nyochaa na njirimara ọzọ (Microsoft Office na ndị ọzọ)
Chọọ Chọọ Nchọgharị na Amalite NchNhr na Kọmitii Obodo Chọọ site na desktọọpụ na Intaneti na Windows ụlọ ahịa, ọchụchọ olu "Cortana" (na Bekee)
Njikwa arụmọrụ Ngwunye ngwá ọrụ, nyochaa ọtụtụ nyocha Kọmputa arụmọrụ dị mma, nsụgharị dị mma nke nchịkọta
Ịma ọkwa Ebe mgbanyụ na ebe ngosi na ala nke ihuenyo ahụ Nkwuputa oge edozi ahaziri na "Ụlọ nkwupụta" pụrụ iche
Nkwado Nyere "Enyemaka Windows" Onye Nlele Olu "Cortana"
Ọrụ ndị ọrụ Ikike ịmepụta akaụntụ mpaghara ebe ọ na-enweghị njedebe arụmọrụ Mkpa ịmepụta akaụntụ Microsoft (na-enweghị ya na ịnweghị ike iji kalịnda, ọchụchọ olu na ọrụ ndị ọzọ)
Ejiri ihe nchọgharị Internet Explorer 8 Anya Microsoft
Nchedo nje virus Standard Defender Windows Ejiri arụmọrụ "Nchedo Nchedo Microsoft"
Download ọsọ Elu Elu
Ọrụ Elu Elu, mana enwere ike ịdabere na ngwaọrụ ndị okenye na ndị ike.
Mmekọrịta na ngwaọrụ mkpanaka na mbadamba Ee e Enwere
Egwuregwu egwu Ebu elu karịa 10 maka ụfọdụ egwuregwu ochie (wepụtara n'ihu Windows 7) Elu. E nwere ọbá akwụkwọ ọhụrụ DirectX12 na "egwuregwu egwuregwu" pụrụ iche
Na Windows 10, a na-anakọta nkwupụta niile na otu teepu, mgbe na Windows 7, ihe ọ bụla na-esonyere ya na ọkwa dị iche.
Ọtụtụ ndị ọkachamara na ndị na-egwu egwuregwu na-ajụ ịkwado nsụgharị nke Windows. Nhọrọ nke mbipute ịwụnye - Windows 7 ma ọ bụ Windows 10, ọ bara uru na-esite na njirimara nke PC gị na mmasị onwe gị.